Aung Win Hein (Noble): 12/06/12
A Princess loves to dream about dancing.
She moves as if she is floating on air.
Snow White meetsahandsome prince.
They happy couple dances and spins.
Belle has sweet dancing dreams.
Belle stands on her toes. She holds her arm high.
She leaps into the air.
မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကာစ ကလေးငယ်အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်...
Belle shines likeastar.
Her dress sparkles.
One leg is up.
One leg is down.
She holds her pose.
Aurora daydreams about her dancing costume.
Should she wearatutu oragown?
Cinderella dances at the royal ball in her dreams.
She twirls and twirls across the floor.
Prince Charming watches Cinderella.
The Prince takes her hand.
They glide across the room.
Ariel dreams about dancing with Prince Eric.
If only she had feet!
Spin and twirl and jump!
Turn and leap and prance!
A princess loves to dance!
မင်းသမီးလေးဟာ ကတဲ့အကြောင်းကို အိမ်မက်မက်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်။
သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာ လေထဲမှာ ပေါလောပေါ်ပြီး လွှင့်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။
စနှိုးဝှိုက်ဟာ ခန့်ငြားတည်ငြိမ်တဲ့မင်းသားတစ်ပါး ကို တွေ့ဆုံတယ်။
သူတို့စုံတွဲဟာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လှည့်ပတ် ကခုန်ကြတယ်။
ဘဲလေးမှာ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကခုန်ခြင်းအိမ်မက်တွေ ရှိတယ်။
ဘဲလေးဟာ သူမရဲ့ခြေချောင်းတွေပေါ်မှာ ရပ်ပြီး
သူမရဲ့ လက်တွေကိုတော့ အမြင့်မှာ မြှောက်ထားတယ်။
သူမဟာ လေထဲကို ရုတ်တရက် ခုန်လိုက်တယ်။
ဘဲလေးဟာ ကြယ်လေးတစ်ပွင့်လို တောက်ပနေတယ်။
အခြားခြေထောက်တစ်ဖက်က အောက်မှာ ချထားတယ်။
သူမဟာ သူမရဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားကို ထိန်းထားနိုင်တယ်။
အော်ရိုရာဟာ အကဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်မက်နေတယ်။
သူမဟာ စကတ် အတိုကို ဝတ်သင့်မလား။ ဒါမှမဟုတ် ဝတ်ရုံအရှည်ကို ဝတ်သင့်သလား။
စင်ဒရဲလားဟာ သူမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာ ခန်းနားတဲ့တော်ဝင်ခန်းမထဲမှာ ကနေတယ်။
သူမဟာ ခန်းမတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ကာ လည်သထက်လည်အောင်လုပ်ပြီး ကခုန်နေတယ်။
မင်းသားငယ်ဟာ စင်ဒရဲလားကနေတာကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စောင့်ကြည့်နေတယ်။
မင်းသားလေးဟာ သူမရဲ့လက်ကို ဆွဲလိုက်တယ်။
သူတို့ဟာ ခန်းမကိုဖြတ်ပြီး ညင်ညင်သာသာနဲ့သက်တောင့်သက်သာ ကခုန်နေကြတယ်။
တက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်ပရိသတ်တွေဟာ လက်ခုပ်တွေတီးပြီး ကောင်းချီး ပေးကြတယ်။
ရေသူမလေးဧရီရယ်ကတော့ မင်းသားအဲရစ်နဲ့တွဲကဖို့ စိတ်ကူးတွေယဉ်နေတယ်။
တကယ်လို့ သူမမှာ ခြေထောက်တွေ ရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။
သူမဟာ လည်နေအောင် လှည့်လိုက်မယ်။ လည်နေမယ်။ ခုန်လိုက်မယ်။
တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်လှည့်လိုက်တယ်။ ခုန်လိုက်တယ်။ ကလိုက်တယ်။
မင်းသားလေးကတော့ သူမရဲ့အကကို နှစ်သက်မှာ သေချာပါတယ်။